Izvi zvakaitika muna Kukadzi. Yangu chiyero che2021 chikamu 3 | Linux Addicts
achitevera neni sarudzo yega yezviitiko zvakaitika muna 2022 mune tekinoroji, nekusimbisa pasirese yemahara software uye yakavhurika sosi, tinosvika mwedzi waFebruary, mwedzi watinovandudza nawo gore negore rudo rwedu rwemahara software. Kusiyana nezvakaitika muna Ndira, pakanga pasina nhau huru, kunyangwe kukakavara kwaigona kushaikwa.
1 Izvi zvakaitika muna Kukadzi
1.1 Amazon inogadzira forogo
1.2 Raspberries neMicrosoft. Musanganiswa usingagadzike
1.3 Nyika ine kangaroo uye isina Google
2 Zvinyorwa Zvinoenderana
Izvi zvakaitika muna Kukadzi
Amazon inogadzira forogo
zvakanaka kuita izvi mhando yeongororo ndeyekuti munhu anopedzisira aona kuti zvimwe zviitiko zvakabatanidzwa sei. Mazuva ano vandinoshanda navo vari kuvhara (ona Related Articles chikamu) mhedzisiro yekutora mukana wemahara software pasina kudzosa chero chinhu mukudzoka kunoita mamwe makambani makuru.
February akatiunzira nhau kuti Amazon yakasarudza kugadzira forogo yemapurojekiti maviri; Elasticsearch uye Kibana. Chinangwa chaive chisiri chekuvandudza zvirongwa izvi asi kudzivirira Elastic, musiki wemapurojekiti uye mukwikwidzi weAmazon Web Service, kubva mukubatsirwa nemari kana nekuvandudzwa kwakaunzwa neAmazon.
Elasticsearch injini yakagoverwa analytics uye analytics yemhando dzakasiyana dze data. Kibana ndiyo dhizaini yekudyidzana kweprojekiti nemushandisi. Inopa data kuratidza uye kutsvaga mabasa.
Tichifunga nezvekushandiswa kwakaitwa neAmazon nevamwe vakwikwidzi kubva kune zvigadzirwa zvavo, Elastic yakafunga kutora maviri maviri chirongwa. Kune rimwe divi, rezinesi raizobvumira nharaunda kuwana, kushandisa, kushandura, kugoverazve uye kubatana nekodhi uye kune imwe, iyo inosungira avo vanoda kushandisa Elastic zvigadzirwa sehwaro hwesevhisi kune wechitatu mapato, kusunungura zvese zvakagadziridzwa kusanganisira iyo kodhi kodhi pasi perezinesi rimwechete.
Mhinduro yeAmazon, dai isiri misodzi, yaizonakidza. Yakaunzwa naCarl Meadows, Senior Chigadzirwa Management Manager kuAmazon's AWS Division:
Kuve nechokwadi chekuti yakavhurika sosi shanduro dzemapakeji ese ari maviri anoramba achiwanikwa uye achitsigirwa zvakanaka, kusanganisira mune zvedu zvipiriso, nhasi tiri kuzivisa kuti AWS ichasimudza kugadzirwa uye kugadzirisa kweforogo yakavhurika pasi perezinesi reALv2. 'Elasticsearch uye Kibana'.
Raspberries neMicrosoft. Musanganiswa usingagadzike
Kune akavhurika sosi mapurojekiti anoita seakagadzirirwa kuunza gakava uye mamwe anowirirana nemunhu wese. Somuenzaniso, pane akanzwa nezvegakava ripi neripi rinobatanidza Gentoo?
Kusvika Kukadzi wegore rapfuura, ndingadai ndakabatanidza iyo Raspberry Pi single board komputa pane iyi runyorwa. Asi zvino vagadziri vayo nkana kuti vaive nezano riri nani pane kubatanidza muRaspberry Pi OS, kugoverwa kwepamutemo kweprojekiti, Microsoft repository.
Pakutanga, chisarudzo chacho chakaita seine musoro. VS Code, Microsoft yakabatanidzwa budiriro nharaunda ndeimwe yeanonyanya kufarirwa pakati pevagadziri. Tisingatauri kubatanidzwa nemamwe masevhisi ekambani seGitHub. Dambudziko nderekuti iyo yekuwedzera haina kutaurwa kune maneja mushandisi wemudziyo wega wega, uye yakatoitwa mukuisa ikoko pasina graphical interface.
Sekureva kwemushandisi weReddit, izvi zvaizobvumira Microsoft kuti igamuchire ping pamaseva ayo pese panowanikwa runyorwa rwezvinyorwa, inokwanisa kuziva mudziyo uye IP kwairi kuwanikwa. Zvadaro, iwe unogona kuyambuka iyo ruzivo nedata rekuwana kune mamwe masevhisi akadai seGitHub kana Bing uye nenzira iyi kuvaka chimiro chemushandisi kuti ushandise iwe pachako kana kuchiendesa kune mamwe makambani.
Nyika ine kangaroo uye isina Google
Zhizha rinoratidzika kuita kuti vanhu vekuAustralia vade kuwana chimwe chinhu kubva mairi. Asi, gore rapfuura yanga isiri yemutambi wetennis asi kune mumwe kunze kweGoogle. Australia yaida kumisa nzira inosungirwa iyo makambani makuru etekinoroji anopa mibairo yechinyakare midhiya yezvavari. Izvi zvakaita kuti mukuru weGoogle muAustralia ataure kuti:
Nheyo yekubatanidza kusingabvumirwe pakati pemawebhusaiti iri pakati peKutsvaga uye, pamwe nenjodzi isingadzoreke yezvemari nekushanda, dai iyi vhezheni yekodhi ikave mutemo, haitipe sarudzo chaiyo asi kurega kuita Kutsvaga kweGoogle kunowanikwa muAustralia.
Mhinduro yaMinister of Communications ndoyaive Vanhu vekuAustralia vaigona kuwana neBing, injini yekutsvaga yeMicrosoft.
Raspberry Pi OS inowedzera Microsoft repository iyo vashandisi isingadi
Imwe nzira yeGoogle yakataurwa naseneta anobva kuAustralia
Sabotage mune yakavhurika sosi purojekiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Izvi zvakaitika muna Kukadzi. Yangu chiyero che2021 chikamu 3
SuperTux yakaburitswa mahara paSteam